कहिले आउँछ ‘को बन्छ करोडपती’ को दोस्रो सिजन ?::Ranga post
५२ वटा एपिसोडसँगै नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय रियालिटी शो “को बन्छ करोडपती” को पहिलो सिजन सम्पन्न भएको छ । पहिलो शो बाटै यो फ्रेन्चाइजले नेपाली टेलिभिजनका दर्शकहरुमा राम्रो छाप पार्न सफल भयो । नेपालभर रहेका दर्जनौं प्रतिस्पर्धीले आफ्नो क्षमता जाँच्न पाए । कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाएकाहरुले भने दोस्रो सिजन कहिले आउँछ ? भनेर प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।
यो शो सर्वाधिक चर्चा र लोकप्रिय हुनुको कारण अहिले सम्मकै सर्वाधिक धेरै राशिको पुरस्कार भएकाले पनि हो । यो शो भन्दा धेरै राशिको पुरस्कार प्रदान गर्ने अहिलेसम्म अन्य कुनैपनि नेपाली टेलिभिजन कार्यक्रम आएको छैन । यसअघि कौन बनेगा करोडपतिबाट प्रभावित हुँदै ‘नगद पाँच लाख’ नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको थियो । त्यसलाई चर्चित कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले संचालन गरेका थिए । तर, प्रतियोगीलाई पुरस्कार रकम दिन नसकेको भन्दै अदालतमा मुद्दासमेत परेको थियो । यसलाई मदनकृष्णले आफ्नो आत्मकथामा पनि उल्लेख गरेका छन् ।
सन् १९९८ मा डेभिड व्रिक्स, माइक ह्वाइटहिल र स्टेभन नाइटले सुरु गरेको ‘हु वान्ट्स टु बी अ मिलिनिअर्स’ को फ्रेन्चाइज भित्राउने नेपाल १ सय ६१ औं देश हो । ‘केबीसी नेपाल’ कार्यक्रममा लाइफ लाइन, अडियन्स पोल, फिप्टी फिप्टी र फोन अ फ्रेन्ड अप्सन थिए । पहिलो संस्करणमा राजिव जैनले १ करोड जितेर पहिलो करोडपति बनेका थिए ।